The Voice Of Somaliland: Badheedhaha Waridaad: Dabacsanaanta Dowladda Riyaale Iyo Gacan-Haadka Shiekh Aweys.
Waxaan markay taariikhdu ahayd, June 11, 2006, ka digay faraglinta ay ku yeelan karto, isbadalkan ka dhacay koonfur Somalia, waddankeena hooyo ee Somaliland. Digniintaa oon dawladda Riyaale, dhawr arimood waydiiyey iyo sidda ay uga tabaabushaysan lahaayeen halista kaga iman karta, seef-la boodyadda waahaabiyiinta ah ee Sacuudiga laga xukumo ood ka akhrisan kartaan: http://waridaad.blogspot.com/2006/06/soomaaliya-waa-muqadis-gooni-isu-taaga.html
Waxaa maamul-gobaleedka majeerteeniya ay fashiliyeen, taariikhdu markay ahayd: July 22, 2006 “Kooxo wadaado xag-jir ah oo isaga kala yimid gobolada Somaliland, ayaa dib u dhigay shir ay ku qabsan lahaayeen magaalada Laas-caanood, kadib markii maleeshiyada Majeerteenya ee Laas-caanood gacanta ku haysaa ay maalintii dorraad ee Sabtidii is-hortaageen shirkaas oo uu qorshaysnaa in lagu qabto meesha la yidhaahdo Geed-Qarsay oo ku taalla duleedka koonfureed ee magaalada Laas-caanood”.
Kooxahaa mayalka adag ee seef la boodka ah oo sidday haatuf qortay iskaga kala yimi guud ahaan goboladda Somaliland ka koobantahay, iyagoo halkaa isagu yimi inay kaga dhawaaqaan waxay ugu magaca dareen, maxkamadd islaami ah oo hoos imanaysa, maxkamaddaha dhawaan la wareegay, Muqdishu, maamulkaas oo lagu waddo inuu hogaamin doono, Garaad Jaamac Garaad Cali oo dabayaaqadii bishii May ee sannadkan lagu caleemo-saaray goobta shirkani ka dhici lahaa. Taageeraddeeda dhaqaalena uu bixin doono, Cali Khaliif Galaydh, oo hantidaa uu ku maal galinayo kooxahaa, ka sameeyey Somaliland.
Waxaa haddaba la yaab iyo amakak ah, dowladan magac u yaalka ah ee haddana uu hogaaminayo nin lagu tilmaamo inuu ahaan jiray sirdoonkii dawladdii burburtay ee kaligii taliye, Afweyne madaxdda ka ahaa, een habba yaratee waxbaba kala socon, dadkan tiraddaa leh ee ku ququlaya gobolka Sool, si ay taageeraddooda u siiyaan, wahaabiyiinta ka amar ku taagleeya maanta, Muqdisha. Waxaa mucjiso ah meesha ay sirdoonka Riyaale ku mashquulsan yahiin. Waxaa iyana mid meesha lagu daro ah, sidda ay sirdoonka maleeshiiyadda Majeerteeniya u heleen khatartaa ee gacanta ugu dhigeen.
Waxaa haddaba haboon, haddii ay ka seexatay dawladdii dadkanu doorteen inay ka caabiyaan wax kastoo ka hor iman kara nabad-galyadda iyo kala danbaynta ay Somaliland dadkeedu gaadhsiiyeen, inay mar labaad u diyaar garoobaan siddii ay isaga caabiye lahaayeen wax kastoo kaga iman kara debadda.
Diinta islaamku waa diin suuban. Dadka somaliyeedna ku dhaqmayeen qariniyo fara-badan. Haddaba, 21-kii sannadood ee ina soo dhaafay, xukunka Afweyne inuu ku raago waxaa u sahlay daba-dhiliflayaal u dhashay cariga Somaliland, kuwaas oo marba wax lagu khaldaayey, kuna sugnaa dalka ilaa intii aanay firxadin fashqastii laga xoreeyey waddanka, iyagoo qaarna raaceen sayidadoodii, intii raaci kari-wadayna noqotay waxa hadda loogu yeedho “ Hadhaagii Faqashta”.
Tii mid la mid ah ayaa haddana soo if-baxaysa. Oo maantana shaadh diimeed ayaa loo soo xidhay, kuwii shalay caruurahoodda iyo sharaftoodiiba hortoodda lagaga xayuubiyey. Mana dhaamaan kuwii u adeegayey faqashta, ee dadkoodna ku soo hogaamin jiray cadowga.
Waxaan ugu digayaa, ummadda diinta suuban ee reer Soomaliland, inay iska jiraan, meelna uga soo wadda jeestaan, maan-laa wayaashaa, marba si loo khaldaayo. Ilaashataana xoriyadda aydun sida adag kula soo noqoteen.
Photos Badheedhaha Waridaad: Dabacsanaanta Dowladda Riyaale Iyo Gacan-Haadka Shiekh Aweys.